Digaag la dubay oo leh baradho iyo khudrad, saxan hodan ah oo fudud. | Cunnooyinka jikada
Digaag la dubay oo leh baradho iyo khudrad
Digaag la dubay oo leh baradho iyo khudrad, Cunto fudud oo dhakhso leh, waa inaan kaliya u diyaarinaa dhamaan waxyaabaha ku jira saxanka foornada iyo voila, waxay ku habboon tahay markaan cunno badan nahay maadaama aan helnay saxan fiican oo wanaagsan umana baahna shaqo badan.
Cunto karis aad u caafimaad badan, dheellitiran oo nafaqo leh, iyo ka-qaybgalka fiitamiinnada ay khudaartu na siiso, saxan aad u dhammaystiran oo fudud oo innagaga qiimo leh ciidaha.
Nooca cuntada: Primero
Wadarta waqtiga: 1 saac 15 daqiiqo
1 digaag weyn ama 2 yar
2 -3 dabacasaha
Waan nadiifinaynaa digaagga dufanka badan oo waan ku nadiifineynaa gudaha, xoogaa yar ayaan jarjaraynaa si aan u furno oo aan u wanaajino.
Waxaan ka fiiqnaa baradhada oo waxaan u jarjarnaa laba jibbaarane, waxaan u jarjarnaa basasha qaybo waaweyn, waxaan sidoo kale jarjarnaa dabacasaha iyo yaanyada.
Waxaan dhigeynaa baradhada iyo khudaarta la jarjaray weel wax lagu dubo, ku dar milix, basbaas iyo dhibic saliid ah digaagana kor saar.
Waxaan dareynaa foornada 180ºC
Waxaan diyaarinaa isku dar ah saliid, liin dhanaan iyo miro oo waxaan dul saarnaa digaagga dushiisa, dhamaantiis waa la daboolay si ay u qaadato dhadhanka.
Waxaan gelineynaa foornada oo waxaan u dhaafnay ilaa 20-30 daqiiqo, waan soo bixinay oo digaagii ayaanu u rognay, waxaan ka qaadnay baradhada iyo khudradda oo dib ayaan ugu celinay foornada.
Waan ka tagnaa illaa ay ka noqonayso bunni dahab ah. 20-30 daqiiqo oo kale.
Mar alla markii aan dubanno, waxaan u adeegnaa kuleyl, oo aan wehelino weel kasta oo lagu qurxiyo baradho yar, basal, karooto iyo yaanyo.
Haddii aad rabto waxaad sidoo kale diyaarin kartaa suugo qurxinta, ku shiidi khudaarta xoogaa maraq yar waxaadna heli doontaa suugo aad u wanaagsan oo aad weheliso saxankan.
By the way, ma ogtahay ilaali baradhada diiray adigoon kharribin? Guji xiriiriyaha si aad u ogaato habab kala duwan oo loo ilaaliyo tan iyo markii laga yaabo inay ku habboon yihiin si loogu diyaariyo qaabkan digaagga la dubay oo leh baradho iyo khudrad.
Dabcan, haddii aad rabto inaad digaagga siiso dhadhan gaar ah, waxaad sameyn karto waa inaad ku sameysid curry. Sidee? Ogow:
Digaag la dubay oo leh curry
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Suxuunta » Cunnooyinka Hilibka » Digaag la dubay oo leh baradho iyo khudrad
Quraac dhameystiran oo caafimaad leh
Broccoli, farmaajo iyo maraq hilib doofaar ah